DVB Multimedia Group - Page2of 25 - DVB Debate Freedom to Disagree
DVB Debate is the first open debate TV program in Burma. You are invited to share your opinion freely and agree to disagree.
· by DVBDadmin · 11 Jul, 2015
Best Quotes of the ‘After the Elections’ Debate
This Sunday at 7:15pm on DVB TV the new DVB Debate on ‘What are scenarios after the Elections?’, but now already the most remarkable quotes, carefully selected for you by DVB Debate’s editorial team....
Scenarios after Elections: Facts & Views
Have your facts straight, before watching the next Debate, by simply reading this 1 pager with facts & figures about ‘What are scenarios after the Elections?’, we’ll discuss Saturday and air this Sunday at...
· by DVBDadmin ·4Jul, 2015
Best Quotes of DVB’s Election Campaign Debate
This Sunday at 7:15pm on DVB TV the new DVB Debate on ‘Election Campaign: Pragmatism or Idealism?’, but now already the most remarkable quotes, carefully selected for you by DVB Debate’s editorial team. (Social)...
· by DVBDadmin ·3Jul, 2015
Election Campaign: Facts & Figures
Have your facts straight, before watching the next Debate, by simply reading this 1 pager with facts & figures about ‘Election Campaign: Idealism or Pragmatism?’, we’ll discuss Saturday and air this Sunday at 7:15pm...
· by DVBDadmin · 1 Jul, 2015
Next on DVB Debate: Election Campaign
၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့ အချိန်အားဖြင့် ၄ လလောက်ပဲလိုပါတော့တယ်။ လက်ရှိအချိန်ထိတော့ ရွေးကောက်ပွဲဝင်မယ့်ပါတီတွေအနေနဲ့ ကိုယ်စားလှယ်ဘယ်နှစ်ယောက်နဲ့ မဲဆန္ဒနယ်ဘယ်နှစ်ခုမှာ ၀င်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်မယ်ဆိုတာ တရားဝင်တိတိပပ မထုတ်ပြန်နိုင်သေးပါဘူး။ ဒါကလည်း ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေအပေါ်မှာလည်း မူတည်နေပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်း မိမိတို့်ဆီမှာလာရောက်အရွေးခံမယ့် ပါတီကိုယ်စားလှယ်ကို မသိရှိရသေးတဲ့အတွက် ဘယ်သူ့ကိုရွေးချယ် မဲပေးမလဲဆိုတာကို ကြိုတင်လေ့လာစောင့်ကြည့်ဖို့ မဖြစ်နိုင်သေးပါဘူး။ လက်ရှိအချိန်မှာတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် ရွေးကောက်ပွဲနဲ့မတူဘဲ ပြည်သူတွေအနေနဲ့ လာမယ့် ၂၀၁၅...